Sida loo nuqul ka Lugood Music in Windows Phone
Koobiyo aad music Lugood in aad Windows Phone waa arrin amarkooda safrayaan, gaar ahaan haddii aad doonaysid in aad isticmaasho orodka computer ah oo ku saabsan Windows 7 iyo wixii ka sareeya. Dadka isticmaala kombuyuutarrada ordaya on Windows Vista ama Windows XP, wax laga yaabaa in xoogaa yar oo sahlan, tan iyo markii ay mar walba isticmaali kartaa Windows Explorer in aad nuqulka ay music Lugood.
Si kastaba ha ahaatee, kuwa isticmaalaya Windows 7, 8, iyo 10, ay u leeyihiin in ay soo bixi barnaamij si loo fududeeyo kala iibsiga. Windows Phone app for desktop yahay barnaamijka aad qabto si loo soo dajiyo si ay kaaga caawiyaan in aad wareejiso Lugood Music on Mac OS, Windows 7, iyo 8.
Dadka isticmaala Mac, waxaa jira update ah in Windows Phone isku xira ee la heli karo ee dukaanka Mac App u OS / X, si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala Windows, waxaa jira diyaariyeen ah ee fursadaha. The app Phone Windows oo lagala soo bixi karaa online, ayuuna u falgala Lugood si aad u hesho dhammaan music iyo playlists, oo aad u isticmaali kartaa si toos ah u hagaagsan.
Haddii aad socda Windows 7, la keeneen in doonaa in aad kala soo bixi waxay markii ugu horeysay aad furaysto in aad telefoon. Dhinaca kale, haddii aad socda Windows 8, waxaad ka bixi kartaa link this . In kastoo, waa inaad ogaataa in app si toos ah saarayso doonaa music kasta oo uu leeyahay DRM Apple, si aad u doonaa si qalad ah ma walax in Windows Phone ma ciyaari karo wareejiyo.
Dadka isticmaala oo doonaya in ay maareeyaan playlists ahaantood, ee Windows Phone la arki karo in Explorer oo ay ku jiididda isticmaali karo oo hoos u Habka in aad nuqulka music. Haddii aad doonayso in aad heli playlist ku Windows Explorer, halkaan Jidka default meesha Lugood dukaamada music:
My Music \_ Lugood \_ Lugood Media \_ Music
Habka ugu fudud ee aad u hesho in ay jidkaa waa iyada oo button Start iyo xulashada Qalabka iyo madbacado. Haddii tani waa mid adag, waxaad mar walba isticmaali kartaa Windows Media Player, oo sidoo kale ay ikhtiyaar u walax kaga dayanayaan inay ka Windows 8 Phone.
Music Copy isticmaalaya Windows Phone app for desktop
Music Copy in Windows Phone si toos ah computer
Gacanta nuqul Music in Windows Phone
• Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo iyo rakibi app Phone Windows u Desktop adigoo gujinaya halkan, ka dibna u abuurtaan.
• Marka labaad, guji Settings ee geeska gacanta midigta sare ee app. Waxa ugu fiican oo ku saabsan barnaamijkan waa in ku dul rakibo, codsiga aad ku socon doonaa, iyada oo loo marayo hanaanka dhamaystiran si toos ah markii hore.
• Ugu dambayn, hoos 'nidaameed music, videos, iyo in ka badan ka', dooro ikhtiyaarka ah ee Lugood.
• Ka dib markii doorashada this, aad music iyo warbaahinta kale waxay tusi doonaa in app Phone Windows u Desktop, kuu oggolaadaan in aad doorato waxa aad u hagaagsan oo aad telefoonka.
• Next, hubi sanduuqa jeeg nidaameed Music.
• Sidoo kale iska hubi sanduuqyada soo socda si ay qaybaha, guutooyinkiisa, iyo / ama albums in aad rabto in aad u hagaagsan oo aad telefoonka
• Riix badhanka nidaameed iyo sugto oo dhan music in la synced.
Haddii aad doonayso inaad joojiso isticmaalaya Lugood ama aad rabto in aad u maamuli lahayd music codsiga kale, sida faylasha galalka, markaa geedi socodkan waxa weeye sida ugu fiican ee aad u. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato meesha files music aad ku kaydsan yihiin.
Inta badan, waxaad ku arkeysaa in aad Music Library. Haddii dhammaan music laga iibsaday Lugood, sidoo kale waxa aad ka heli kartaa in C: \_ Users "magacaaga" \_ My Music \_ Lugood \_ Lugood Media \_. Waxaa laga yaabaa inaad:
• Marka hore la helo meesha on your computer meesha music waxa lagu kaydiyaa.
• Markaas furo Windows Explorer (on Windows 7) ama File Explorer (Windows 8 ama 10). Si toos ah, aad Windows Phone kor u muujinaysa sida qalab ee ay leeg- bidix.
• Ugu dambayntii, guji si aad bidixda, ka dibna ku drive ka icon adag.
• Inside folder darawalka helo folder Music ah.
• Koobiga & dhaji files ka folder music aad aad kombuutarka in folder Music on your Windows Phone ah.
Wixii hawshan, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka kale. Ilaa xad, Music dejinta waa habka ugu fudud ee ay u soo diri files music aad Windows Phone 8 qalab ka PC aan baahida loo qabo in fiilooyinka. Music dejinta isticmaalaa xiriir network u dhexeeya aad PC iyo Windows Phone 8 qalab, oo uu leeyahay interface fudud oo kuu ogolaanaya inaad si ay u qaadato oo aad doorato oo music files in ay u diraan si aad Windows Phone.
• Kadib markii ay barnaamijka Music dejinta aad kombuutarka, URL ah lagu soo bandhigi doonaa oo waxaad yeelan doontaa in ay galaan browser aad PC ee. Shuruudaha looga baahan yahay oo kaliya app this in ay ka shaqeeyaan biraawsarkaaga waa taageero HTML5.
• Marka aad qortid URL ah browser PC ah, your computer iyo Windows Phone si toos ah ugu xiran doonaa.
• heesaha oo dhan in mar hore waa in aad Windows Phone lagu soo bandhigi doono bogga browser.
• Hadda, in ay hoos u hees ku saabsan in aad Windows Phone aad u baahan doontaa in la furo Windows Explorer ku ciyaaro kale oo ka heli file gabaygii gaar ah oo Jaximo goobo daruur Upload ah.
• Music dejinta markaa soo diri doonaa faylasha off si aad Windows Phone Music Library.
Haddii kale, waxaad dooran kartaa in ay ku wareejin music iyo macluumaadka kale ee gacanta isticmaalaya File Explorer. Si aad u wareejin music Lugood, u tag tusaha in oo nuqul ka badan waxa aad rabto in aad Card SD ama lagu kaydiyo gudaha telefoonka ee. Laakiin habkan qaadan doontaa muddo ka badan iyadoo la isticmaalayo habab hore ka wada hadleen.
Haddii aadan hubin halka aad music ururinta Lugood waxa uu ku yaalaa, si fudud u furo Lugood oo taga si Edit> rabtid> Advanced Options. Marka ay jiraan, waxaad ka heli doontaa jidka aad folder Lugood Media. In gal ay helaan Music Video iyo fayl.
Windows Phone Vs Android vs macruufka, oo OS mobile ugu fiican
Liiska kordhin file in windows media player taageeray ama ma
Sida loo isticmaalo Microsoft Cortana on Windows 10
Talooyin Isticmaalka VLC on a Phone Windows
Sidee si ay u gudbiyaan iPad Camera Roll in PC
> Resource > Windows > Sida loo nuqul ka Lugood Music in Windows Phone